Faraqa u Dhexeeya; Qoraa, Mu-allif, Noofalayste iyo Turjumaan Author Vs Writer,Novelist,Translator Qaybtii 1aad:
Tuesday March 13, 2018 - 17:40:15 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Writer: Waa qof ku cabbira afkaarta qoraal, kuna guda jira shaqooyinka qoraalka ah sida buugaagta. Inta badan waxa uu wax ka qoraa Fanka iyo Suugaanta (Art &amp; Literature). Novelist: Waa qof qora sheekooyin mala-awaal ah, amma dhab ah, oo kusoojiita, qosol iyo
majaajilo ku dheehantahay. Author: Waa qof soo ururiya xaqiiqooyin, warbixino,dhukmantiyo. Habeeya oo tilmaama tixraacooda. Hal-abuur leh , Abuuri kara qoraal curis ah oo ku dhisan fikir. Turjumaad iyo Macnayn(Translation &amp; Interpreting): Wixii qoraal ah ee loo bedelo luqad kale waa la turjumay. Wixii hadal ah, amma suuldhabaale ah ee loo badalo luqad kale waa la macneeyay. Dadka wax turjumaa waxa ay bartaan aqoonta TURJUMAADA . Barashada turjumaada Vs Barashada luqadaha: Turjumaadu waa majaal waxbarasho amma xirfadeed oo gaar ah(Separate discipline or field of study) kana duwan barashada luqadaha. Haddii qof sito shahaado darajada 1aad ee luqada Ingiriisiga iyo Carabiga, ma odhan karno hebel waa Turjumaa labada luqadood ee Ingiriisi iyo Carabi. Balse haddii uu sito shahaado isku turjumaada labada luqadood ah waynu odhan karnaa hebel waa turjumaa labadaa luqadood ah. (BA in English/Arabic Languages Vs BA in Translation of English/Arabic Languages). Turjumaadu ma aha kalmada amma weedha ku beeg mid la macno ah. Waxa ay leedahay qaacidooyin la raaco, miisaan la saaro iyo noocyo kala duwan. Waxa kale oo ay ku xidhantahay sida aad u taqaano Balaaqada, Naxwaha iyo Suugaanta luqadaha aad isku turjumayso. Waxaana lagama marmaan ah haddaad turjumaan noqonayso ugu yaraan waan in aad taqaanaa mid ka mid ah LUQADAHA LOO YAQAANO HOOYOOYINKA AFAFKA oo ah:
2. Hebrew (Afka Yuhuda)
4. Latin (Spanish, French, Italy…)
Waxa aad iyo aad u muhim ah in uu qofka Qoraaga ahi uu wax badan ka yaqaano Censorship of Writing and Translation (FAAF-REEBKA QORAALKA). Fadlan Lasoco qaybta 2aad ee taxanaha…………………………..
Mohamed Omer Abdilahi(Saleban)
Administration and Finance Consultant Hargeisa
Cell Phone 252 2 63 4123692